Shimbiraha careysan 2 loo sii daayay Play Store | Androidsis
Manuel Ramirez | | Shimbiraha cadhooday, Ciyaaraha Android
Badhtamaha bisha waxaan baranay warka imaatinka Shimbiraha Xanaaqsan 2. Qaybta labaad ee ciyaartan fiidyowga caanka ah ayaa ugu dambayntii timid. wuxuu u furay Rovio suurtagalnimada inuu ka mid noqdo magacyada waaweyn ciyaaraha fiidiyowga ee qalabka mobilada. Tan iyo markaas waxaan aragnay tiro badan oo taxane ah oo dhacaya kuwaas oo aan ku aragnay nooc kasta oo kala duwanaansho ah. Shimbiraha waalan waxay soo mareen Star Wars ama inay noqdaan halyeeyada jinsiyadaha waalan ama maxaa noqon lahaa ciyaar nooca Candy Crash. Waxay heleen goose-ka oo dhigay ukunta dahabka ah Roviona wali wuxuu dhigayaa dambiilaha midba midka kale ka dib.
Mid ka mid ah ukuntaas dahabiga ahi waa shimbiraha careysan 2. Isku xigxiga mid ka mid ah cayaaraha ugu wanaagsan ee qalabka mobilada ayaa hadda laga heli karaa Google Play Store. Markan waxay la yimaaddaan sawirro kafiican, heerar heer-marxaladeedyo badan oo ay ka buuxaan caqabado, doofaarrada tababaraha xeeladaysan iyo halaag ka badan sidii hore loogu arkay cinwaanadii hore. Kaalay, shimbiraha yaryar ee waalan waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin badan markaan ka hortagno xarumaha cusub iyo khiyaanooyinka ragga ee ka socda Rovio oo ay la socdaan Shimbiraha Xanaaqsan 2.
1 Sida ugufiican ee taxanaha leh Shimbiraha Xanaaqsan 2
2 Awoodaha aan hore loo maqal ayaa ku sugaya
Sida ugufiican ee taxanaha leh Shimbiraha Xanaaqsan 2
Caqli ahaan qeybta labaad ee ciyaartaada caanka ah ee fiidiyowga ah waa inaad dib u siisaa wax kasta oo ahaa Shimbiro careysan laakiin leh wax badan oo chicha ah. Naqshadeynta wanaagsan, fiisigiska shey badan iyo jilayaal badan oo leh awoodo cusub, adigoon ilaawin heerarka cusub ee aad uga dhigi doona dhib malaayiin ciyaartoy ah oo mari doona rakibaadda cinwaankan toddobaadyada soo socda.
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee Birds Birds 2 ayaa ah taas Waxaan dooran karnaa shimbirta aan soo bandhigi doonno mar kasta oo aan diyaarinno dharbaaxada halista ah. Marka halkan waxaa imanaya cunsur istiraatiiji ah oo aad u tiro badan waxa cinwaanadii hore ahaa
Mid kale oo ka mid ah sheekooyinkeeda cusub waa heerarka wejiyada badan, sidaa darteed waxaad la kulmi doontaa ciyaar kugu qaadan doonta daqiiqado ka dheer sidii hore. Halkan qaaciddada heerarka ayaa looga faa'iideystay si loo siiyo Shimbiro ka xanaaq badan sidii hore weligood taageerayaashooda u dhinta-adag adduunka oo dhan.
Awoodaha aan hore loo maqal ayaa ku sugaya
Waxaan ka faallaynay wararka ugu xiisaha badan, uguna dambeeya ee aan ka tagnayna waa sixirka iyo xayawaanka aan caadiga ahayn ee inoogu soo gurmanaya sida Gorgorka Weyn. Awoodahan gaarka ahi waa basbaas kulul, shinbiraha dahabiga ah, jiilaalka iyo noocyo kale oo aad u baahan tahay inaad naftaada ku ogaato isla marka aad rakibto Shimbiraha Xanaaqsan 2.
Rovio ayaa la soo laabtay sheekadan weyn qaybtiisa labaad oo uu ku celceliyo qaacidadii isaga siisay dhammaan guusha ee Shimbiraha Xanaaqsan ee ugu horreeya. Qaaciddadan ayaa ka faa'iideysanaysa si walxad kasta oo sidaas u gartey ay hadda ugu timaaddo awood dheeri ah iyo casiir badan, taas oo runtii ah waxa dad badani doonayaan. Kama ciyaari doontid kubbadda koleyga shimbiraha careysan 2 haddii aad rabto inaad ku burburiso dhammaan noocyada dhismayaasha iyo heerarka madaxyada astaamahan quruxda badan.
Waxaad ku haysataa bilaash dukaanka Play-ka oo ay ku jiraan lacagahaas yaryar taas oo mar horeba ahayd wax joogto ah inta badan ciyaaraha fiidiyowga ee ku dhex wareegaya Dukaanka Play Store. Inta soo hartay, wax yar oo dheeri ah oo aan dhihi karno waxaan wajaheynaa Shimbiro Xanaaqsan 2 oo cunaya kheyraadkeeda si loogu diyaariyo qalabka taleefankaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Shimbiraha cadhooday » Shimbiraha Xanaaqsan 2 hadda waxaa laga heli karaa Play Store
Yahoo ayaa soo saartay Livetext, oo ah barnaamij fariin cusub oo isku dhafan fiidiyowga iyada oo aan maqal lahayn iyo fariimaha qoraalka ah